သခင်ယေရှု၊ တိဘက်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ။ ကျွန်ုပ်တို့ လိုက်နေသည့်လမ်း ? အပိုင်း (၁) ~ The Ahmadi Post : Myanmar
May 08, 2012 admin No comments
အကြောင်းအရာက အလွန်မှရှည်လျားတာကြောင့် အပိုင်း နှစ်ခု သုံးခုလောက်ခွဲပြီး တင်ပြသွား ပါ့မယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဘက်က တစ်မျိုး၊ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ ဘက်က တစ်မျိုး၊ ဟိန္ဒူနဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ ဘက်ကတစ်မျိုး တစ် ယောက်တစ်မျိုးမရိုးနိုင် အောင် ပြောဆိုနေမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ အခုတင် ပြချက်က စာရေးသူရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လေ့လာသုံး သပ်ချက် သက်သက်ဖြစ်ပြီး ဘယ်အဖွဲ့အစည်း၊ ယုံကြည် ချက်ကိုမှ ကိုယ်စားပြု မထားပါ။ ကိုယ်ပိုင် လေ့လာ သုတေသနပြုထားချက်ကို မျှဝေခြင်းသဘော ဖြစ်ပါတယ်။ အမှား အယွင်းပါရှိရင်တော့ စာရေးသူရဲ့ အားနည်းညံ့ဖျင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ဝီကီကဖော်ပြတဲ့ ယေရှု၏ပျောက်ဆုံးနေသောခုနှစ်များအကြောင်း လေ့လာကြပါမယ်။
wikipedia ဖော်ပြချက် - (http://en.wikipedia.org/wiki/Lost_years_of_Jesus)
အိန္ဒိယ နှင့် တိဘက်သို့ ခရီးစဉ်
ဆိုင်ကိုလိုဂျစ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Elmer R.Gruber နဲ့ သာသနာရေးသမိုင်းရေးရာကျွမ်းကျင်သူ Holger Kersten တို့က ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ ခရစ်တော်ရဲ့ ဘ၀နဲ့ သွန်သင်ချက်များအပေါ်မှာ မြောက်မြား စွာ လွှမ်းမိုးနေကြောင်း တင်ပြကြပါတယ်။ သူတို့၂ဦးက ခရစ်တော်ယေရှုသည် ထေရဝါဒအတွေး အခေါ်များ လွှမ်းမိုးကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီးနောက် ဂျူးဒီယခေါ် ယခုအရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အစ္စရေးနှင့် ပါလစ္စတိုင်းတို့တည်ရာဒေသတွင် နေထိုင်ခဲ့ကြောင်းတင်ပြကြပါတယ်။ ၄င်းတို့နှစ်ယောက် ဟာ ၁၉၃၀ ပြည့်လွန်နှစ်များမှာ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာ လေ့လာရေးပညာရှင် Barnett Hillman Streeter ရဲ့ ကောက်ကြောင်းအတိုင်း လိုက်ခဲ့ကြပြီး Barnett Hillman က ဗုဒ္ဓ၏ နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သွန်သင်မှုများထဲတွင် ယေရှု၏ တောင်ပေါ်ဒေသနာမှ အချက် ၄ ချက်နှင့် တူညီမှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိ ရသည်လို့ တင်ပြခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ဘိုင်ဘယ်ကျမ်းစာ စိန့်မက်သရူးဖော်ပြချက်အရ ယေရှုသည် မိမိ၏ငယ်စဉ်ဘ၀ကို ပိုးလမ်းမကြီး အဆုံးရှိ နိုင်ငံဖြစ်သော အီဂျစ်တွင်ကုန်ဆုံးစေခဲ့ကြောင်း သိရပြန်ပါတယ်။ သို့သော်ယင်းအချိန်က အီဂျစ်ပြည် အလက်ဇန်ဒယီးရား၌ ထေရဝါဒကျောင်းများ ရှိနေခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားချက်ကို The Gnostic Gospels and Beyond Belief: the Secret Gospel of Thomas by Elaine Pagels and The Original Jesus by Gruber and Kersten ဆိုတဲ့စာအုပ်များမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Gospel of Thomas နဲ့ Nag Hammadi လို့ခေါ်တဲ့ အီဂျစ်ပြည်အထက်ပိုင်းမြို့ တစ်မြို့ဖြစ် တဲ့ နဂ်ဟမ္မဒီမှာ ၁၉၄၅လောက်က ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရှေးကျသော ခရစ်ယာန်သာသနာရေးဆိုင်ရာ ရေးသားချက်များထဲ၌ ထိုအဖြစ်အပျက်ကို ဖော်ပြထားဖွယ်ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။
အာဖဂန်နစ္စတန်၊ အီရန် ၊ ပါကစ္စတန်၊ အိန္ဒိယ နှင့် ဂျပန်တို့မှာတောင် ယေရှုခရစ် မိမိတို့ နယ်မြေ များသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း ရိုးရာအစဉ်အလာစကား ရှိနေပါတယ်။ တချို့ သက်သေပြု ချက် များအရ ယေရှုဟာ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာ ကွယ်လွန်ခြင်းမရှိဘဲ လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး အရှေ့ဘက် သို့ ခရီးနှင် ကာ နှစ်အတန်ကြာတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကက်ရှ်မီးယားဒေသ၌ကံကုန်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပြန်ပါ တယ်။
အထက်ပါအမြင်ကို ကျော်ကြားတဲ့သုတေသနပညာရှင် Fida Hassnain နဲ့ Suzanne Olsson တို့က နက်ရှိုင်းစွာလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ Suzanne Olsson ကတော့ ယေရှု၏ အဆင့်မြင့် ပညာလေ့ လာခဲ့ တဲ့ အချိန်များအတွင်း ပျောက်ဆုံးနေတဲ့နှစ်များကို အထောက်အပံ့ပေးရန် သက်သေသာဓက များနဲ့ ၄င်းနှစ်များအတွင်း အခြားထင်ရှားသည့် ပုံဆောင်ချက်များကို ဆန်းစစ်ခဲ့ ပါတယ်။ အချို့ အစဉ် အလာစကားအရ ယေရှုဟာ ပျောက်ဆုံးနေသော နှစ်များအတွင်း တိဘက်သို့ သွားရောက် ခဲ့ကြောင်း ၊ ယင်းမှာ ယေရှုအနေဖြင့် မိမိ၏ မစ်ရှင်၊ သာသနာပြုလုပ်ငန်း မစတင်မီ အချိန်တွင်ဖြစ် ခဲ့ကြောင်း ဖြင့် သိရှိရပါတယ်။
ရုရှလူမျိုး စစ်သတင်းထောက် Nicolas M. Notovitch က ၁၈၈၇ မှာ အိန္ဒိယနှင့် တိဘက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ Nicolas Notovitch က Ladakh မြို့ရှိ Himis ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ စိန့်အီဆာ (ယေရှု)၏ ဘ၀ထုပ္ပတ်အကြောင်းလေ့လာခဲ့ရကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
သူရဲ့ စိန့်အီဆာအထုပ္ပတ္တိကို ၁၈၉၄ တွင် ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်၊ ဂျာမန်နှင့် စပိန်ဘာသာပြန်များလည်း ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ Nicolas Notovitch ရဲ့တင်ပြချက်ပါ သံသယပွားစရာအဖြစ်အပျက်များကြောင့် Sri Ramakrishna ၏ တပည့်တစ်ဦးဖြစ်သော Swami Satyasangananda က သူ၏တင်ပြချက်အားလေ့လာဆန်းစစ်ရန် တိဘက်သို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး Swami Satyasangananda ကပင် အထောက်အထားများ ဘာသာပြန်ဆိုမှုကို ကူညီခဲ့တဲ့ပြင် နောက် ပိုင်းမှာ Nicolas Notovitch ရဲ့အမြင်ကို အထောက်အပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ Swami Satyasangananda က ယေရှုအနေနဲ့ ၁၈ နှစ်ပတ်လုံး အိန္ဒိယရှိရှေးဟောင်းတက္ကသိုလ် နလန္ဒ၌ ပညာ ဆည်းပူးခဲ့ကြောင်း ခန့်မှန်းပြောဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။
Nicolas Notovitch ၏ ရေးသားမှုတွေကတော့ ချက်ချင်းပဲ ကန့်ကွက်ရေးသားမှု ခံခဲ့ရပါတယ်။ အလွန်ကျော်ကြားတဲ့ ဂျာမန်လူမျိုး အရှေ့တိုင်းပညာရှင် Max Muller က Notovitch ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ တိဘက်က Himis ဘုန်းကြီး ကျောင်းတည်ရှိမှုကို အထောက်အပံ့ပေးခဲ့ပေမယ့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ အဂ္ဂရာမြို့နေ၊ ပရောဖက်ဆာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ J.Archibald Douglas က ထိုဘုန်းကြီး ကျောင်းသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်တွင် Notovitch တင်ပြသော ယေရှု၏ သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာ အချက် အလက်များ စိုးစဉ်းမျှ မတွေ့ရကြောင်းဖြင့် Notovitch ၏ အမြင်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပဲ ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် Himis Community ရဲ့ ဥသျှောင်က စာတန်းတစ်ခုထုတ်ပြန်ကာ Notovitch ကို အဆုံးစွန် လိမ်လည်သူဖြစ်ကြောင်း အပြစ်တင်ဖော်ပြကာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါ တယ်။
ကျော်ကြားတဲ့ Elizabeth Clare Prophet ကဲ့သို့ Spiritualist (နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ) စာရေးဆရာ များကမူ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်မူများနဲ့ တိဘက်နှင့် အိန္ဒိယနယ်များကို ယေရှုရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းကို လက်ခံတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ Elizabeth Clare Prophet က သူမရဲ့ The Lost Years of Jesus: Documentary Evidence of Jesus' 17-Year Journey to the East တွင်တဲ့စာအုပ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေများအတွင်း ယေရှု၏ အိန္ဒိယ၊ နီပေါလ်၊ လဒက်ခ်နှင့် တိဘက်ဒေသများသို့ ခရီးလှည့်လည်ခဲ့ကြောင်း အထောက်အထားကို တွေ့နိုင်တယ်လို့ ရေးသားတင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဟိန္ဒူနှင့် တိဘက် သာသနာအမြင်များလည်းရှိနေပြန်ပါသေးတယ်။ ဂျာမန်ပညာရှင် Kersten က Bhavishyat Maha Purana (ဘာဝိယ မဟာပူရာဏ) တို့ရဲ့ အမြင်အရ အစ္စရေး အမျိုးအနွယ် များဟာ အိန္ဒိယမှာ အခြေချခဲ့ပြီး Pratisargaarvan (ပရာတိစ္စာရ်ဂါးရ်ဝန် ဟုခေါ်သည့် ဟိန္ဒူကျမ်း စာ) ပါ မုက္ခပါတ်နံပါတ်စဉ် ၁၉.၁၇ - ၃၂ အရ လဒက်ခ်သို့ ယေရှုရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းကို အောက်ပါ အတိုင်း ဖော်ပြထားကြောင်း တင်ပြပါတယ်။
"" တစ်နေ့တွင် စကြာအကြီးအကဲဖြစ်သော Shalivahan သည် ဟိမ၀န္တာတောထဲသို့ သွားလေ သည်။ Hun မြေ (ကူသျှန်အင်ပါယာ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော လဒက်ခ်) တွင် ထိုသည့် စွမ်းအား ရှင်ဘုရင်မင်းသည် တိတ်နိမိတ်ကောင်းခြင်းကြန်အင်နှင့်ပြည့်စုံသော လူတစ်ယောက် တောင်ပေါ် တွင် ထိုင်နေသည်ကို တွေ့လေသည်။ ထိုသူ၏အရေမှာ ကြေးနီရောင်ရှိပြီး အဖြူကို ဆင်မြန်းထား လေသည်။ ဘုရင်မင်းက ထိုသည့် သူတော်စင်ကို မည်သူဖြစ်ကြောင်း မေးမြန်းခဲ့ သည်တွင် သူက ကျွန်ုပ်ကို ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဟု ခေါ်ကြကြောင်း၊ စင်ကြယ်စွာ မွေးဖွားသန့် စင်ခံခဲ့ရ ကြောင်း၊ မယုံကြည်သူများအတွက်ဓမ္မဆရာ ဖြစ်ကြောင်း၊ မလျော့သောဇွဲဖြင့် အမှန်တရားကို ရှာဖွေလျက်ရှိ ကြောင်းဖြင့်ပြန်ကြားလေသည်။ ""
ထပ်ဆင့် ပြန်ကြားသည်မှာ - "" အို၊ ဘုရင်ကြီး ၊ မယုံကြည်သူများထံ ကျွန်ုပ်ယူဆောင်လာသော ဘာသာတရားကို နားစွင့်ပါလော့။ -- သမ္မာတရား၊ မှန်ကန်ခြင်း၊ တရားထိုင်ခြင်း နှင့်ဝိညာဉ်၏ တည်မြဲခြင်းအားဖြင့် လူသည် အလင်းရောင်ခြည်၏ အလယ်ဗဟို၌တည်သော် အီဆာမည်သည့် လမ်းကို ရှာဖွေတွေ့လိမ့်မည်။ သူရိန်ကဲ့သို့ တည်မြဲသော ဘုရားသခင်က အဆုံး၌ ဝေနေယျ သတ္တဝါအားလုံး၏ ဝိညာဉ်ကို အံဖွယ်ရာတန်ခိုးဖြင့်ပေါင်းစည်းလိမ့်မည် ---- သုခချမ်းသာနှင့် ပြည့်စုံသော ၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုပေးသော အီဆာ၏ ပုံရိပ်သည် နှလုံးဘ၀င်တွင် ထာ၀ရတည်မြဲနေ လိမ့်မည်။ ယင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်သည် အီဆာ၊ မေတ္တေယျ (ဂျီးစပ်မေရှိယ) ဖြစ်သတည်း။ ""
ကရှ်မီးယား မှ သခင်ယေရှု
တမန်တော်မုဟမ္မဒ်(သခင့်အပေါ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံမှ ငြိမ်းချမ်းခြင်းကျရောက်ပါစေသော်ဝ်) ၏ အဆိုအမိန့်တစ်ရပ်အရ ယေရှုသည် သက်တော် ၁၂၀ မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကရှ်မီးယားတွင် ကွယ်လွန်တော်မူကြောင်း သိရပါတယ််။ အစ္စလာမ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အဟ်မဒီယာမွတ်စလင်မ် လှုပ်ရှားမှုက အထက်ပါအဆိုကို နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်မျှ ထောက်ခံပြောဆိုနေကြပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်နှင့် ပါရှား အထောက်အထားများကလည်း အီဆာ(သို့) အရှေ့တိုင်းသို့ဦးတည်သည့် ဟောင်းနွမ်းသော ပိုးလမ်းမှ Yuz Asaf (အနာရောဂါကင်းပသူများ၏ ဥသျှောင်)ရဲ့ ယာယီနေထိုင် ရာနေရာကို မှတ်သားထားတဲ့ သဘောရှိတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ကရှ်မီးယားမှ ခရစ်တော် (Chritst in Kashmir) ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုရေးသားသူ Aziz Kashmiri နဲ့ Holger Kersten ရဲ့ Jesus Lived in India စာအုပ်တို့ကလည်း အထက်ပါအမြင်ကိုထောက်ခံထားပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကရှ်မီးယားနယ်မှာ သူတော်စင်အီဆာကို ညွှန်းသော ဘုရားကျောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းရှိ ဘုန်းကြီးများက လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့်က ယေရှု ၊ မိမိတို့နေရာသို့ လာရောက်ခဲ့ကြောင်း အခိုင်အမာပြောဆိုနေကြပါတယ်။ Kersten ရဲ့ အဆိုအရ ၂၁ ခုမျှသော သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများအရ ယေရှု ၊ ကရှ်မီးယားမှာနေထိုင်ခဲ့ကြောင်းသိ ရပါ တယ်။ ထိုဒေသနေရာအနှံ့အပြားနဲ့ ပိုးလမ်းမကြီးတစ်လျောက်မှာ ယေရှုအမည်များကို တနည်းတဖုံ ပြောဆိုမှုများရှိနေပြီး မောရှေရဲ့ အမည်များကိုလည်း အဲဒီလို ပြောဆိုကြကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ကရှ်မီးယားနယ်၊ ဆရီနဂါမြို့မှာတော့ Yuz Asaf အမည်ဖြင့် သင်္ချိုင်းဂူတစ်ခုယနေ့ ထက်တိုင်ရှိနေ ကြောင်း ၊ ယင်းသည် မောရှေ၏ ဂူသင်္ချိုင်းနှင့် ၈၀ ကီလိုမီတာဝေးကြောင်း ၊ အဲဒီသင်္ချိုင်းဂူက တော့ Rishis တို့ရဲ့ ကြပ်မတ်မှုအောက်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၇၀၀ကျော်မျှကြာပြီဖြစ် ကြောင်းဖြင့် wiki က တင်ပြထားပါတယ်။
ကရ်ှမီးယားရှိ Yuz Asaf အမည်ဖြင့် ဂူသင်္ချိုင်း
ပါကစ္စတန်၊ ကရှ်မီးယားဘော်ဒါရှိ မာရီမည်သော ရွာငယ်လေးမှာတော့ Mai Mari da Asthan (The Final Resting Place of Mother Mary) ခေါ် မိခင်မေရီ၏ နောက်ဆုံးလဲလျောင်းရာလို့တွင်တဲ့ ဂူသင်္ချိုင်းတည်ရှိနေကြောင်း wiki က တင်ပြထားပါတယ်။
အခုတဖန် ယေရှုသည်ပျောက်ဆုံးနေသာနှစ်များအတွင်း တိဘက်ဒေသမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေ့လာ ဆည်းပူး နေခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပထမဆုံးတင်ပြခဲ့တဲ့ Nicolas Notovitch ရဲ့ The Unknown life of Jesus Christ ကို လေ့လာကြပါမယ်။
The Unknown Life of Jesus Christ by Nicolas M. Notovitch
(Translated from the french and edited with an introduction and illustrations by Virchand R. Gandhi, B.A , Bombay, India - Revised by Prof: G.L Christie , B.A , of The University of Paris - Production: Chicago: Virchand R.Gandhi 6558 Stewart Boulevard 1894 )
ရုရှလူမျိုး Nicolas M. Notovitch
Nicolas Notovitch ရဲ့ စာအုပ်ကသာ ဂျီးစပ်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ တိဘက်သို့ ရောက်ခဲ့ကြောင်း ပထမဦး စွာ တင်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ယေဘုယျသုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။ သမိုင်းအမြင် အရ သူ့စာအုပ်ပါ ဖော်ပြချက် များ ကို တင်ပြဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ သို့အားဖြင့် သူ့စာအုပ်ပါဖော်ပြ ချက်များကို ယုံကြည်နိုင်ဖွယ်ဟုတ်မဟုတ် အကဲဖြတ်နိုင်မည်သာမက ထိုခေတ်တိဘက်ဒေသရှိ ကိုးကွယ်ရာ သာသနာ အခြေအနေနှင့် ယုံကြည်မှုတို့ကိုပါ လေ့လာသိရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ယင်းစာအုပ်ရဲ့ Introduction ၊ မိတ်ဆက်အပိုင်းကို ပထမဦးစွာ ရှုစားပါသော် အောက်ပါအတိုင်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ယေရှု အသက် ၁၃နှစ်အရွယ်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့သွားရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ပထမဦးဆုံး public ၊ လူထုပရိသတ်ကို ဖွင့်ဟပြခဲ့သူက Notovitch ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ဘာသာပြန်တင်ပြသူက နိဒါန်းပိုင်း မှာ အခုလိုရေးသားထားပါတယ်။
" The theory that Jesus at the age of 13 went to India has been held by many to be true, but it is for the first time advanced publicly by M.Notovitch. " (Introduction page: XVIII)
ဘာသာပြန်ဆရာက အဲဒီစာမျက်နှာမှာပဲ ထပ်ဆင့်တင်ပြထားတာက -
" .... Europeans and Americans too, who think that ' India has no history worth mentioning until the time of the Mahomeda conquest;' that Indian history is nothing butadreary record of disunion and subjection, and who on the whole present to the public, India asaconquered country. " (Introduction page: XVIII)
အိန္ဒိယကို မဟာမေဒင်တွေမသိမ်းပိုက်ခင်ကာလ နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းက ဖော်ပြဖို့ ထိုက်တန်လောက် အောင် ရှင်းလင်းမှုမရှိ၊ ပျင်းရိဖွယ်ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန် စုစည်းမှုရှိမနေတဲ့ အထောက်အထားမျိုးသာ ဖြစ်ကြောင်း အနောက်တိုင်း schlor တွေက ပြောဆိုကြပါတယ်။ ဒီနေရာက စာဖတ်သူတွေထံ သံသယပွား ဖွယ်အကြောင်းအရာကို စတင်မွေးဖွားပေးခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယသမိုင်းက ခိုင်လုံမှုမရှိ ဆိုတာ ကို ယင်းစာအုပ်ထဲမှာပင် အထက်ပါအတိုင်း စတင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
စာအုပ်တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထားတာက - M. Notovitch က ၁၈၈၇ မှာ အိန္ဒိယကို ခရီးစတင် ထွက်ခဲ့ ပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်နေ့၊ ညနေဘက်မှာ ကရှ်မီးယားမြို့တော် ဆရီနဂါကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၂၇ မှာတော့ တိဘက်ကို ဆက်လက်ခရီးနှင်ခဲ့ပါတယ်။ ယေရှုရဲ့ အိန္ဒိယနှင့် တိဘက်ရောက်သမိုင်းကြောင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိမယ့် နေရာဒေသအကြောင်းကို M. Notovitch ဖော်ပြချက်က အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
လဒက်ခ်မြို့ (သို့) တိဘက်သေးသေးလေးလို့ တွင်တဲ့ မြို့ကို M. Notovitch ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက် ဖော်ပြထားတာက -
Especially was he astonished at this polyandry flourishes there among the low class peple. Polyandry isasubject on which different writers have risked their opinions without knowing the facts. It is true that among the non-Aryan hill tribes this custom has existed for centuries and the Hindu rules did not interfere with them. They relied not on forcing their views uponapeople but on educating them to it. The hill tribes who follow the custom of polyandry are isolated communities and socially have no connection with the Hindus. The trans-Himalayan tribes, too, follow this custom which has existed among them foralong time. " (The Unknown Life of Jesus Christ by Nicolas M. Notovitch, Page: 42)
အထက်ဖော်ပြချက်အရ သိရှိရတာက M. Notovitch တိဘက်ကို ရောက်ရှိစဉ် အဲဒီမှာ ဟိန္ဒူတွေရှိနေခဲ့ပြီး အောက်တန်းလွှာမိန်းမများ လင်အများယူတဲ့ဓလေ့လည်းရှိကြောင်း၊ ထိုဒေသရှိ မိန်းမများမှာ လင် ၃ယောက်မှ ၅ယောက်ထိယူခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ ၁၈၈၇ မှာတောင် အဲသလို အခြေအနေမျိုးရှိနေသေးတယ်ဆိုရင် ယေရှုရောက်ခဲ့ချိန် အဲဒီဒေသအခြေအနေ က ဘယ်လိုရှိနေပါ့မလဲ။ ဒါ့အပြင် M. Notovitch ရောက်ရှိချိန် အဲဒီဒေသမှာ လင်အများထား ခြင်းရှိနေ သေးတာကို ရှုထောက်ရသဖြင့် အဲဒီဒေသမှာ ဘယ်လို ဘာသာသာသနာပြန့်နှံ့ နေနိုင်ပါသလဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နိုင်ပါလား ဆန်းစစ်ဖွယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
တိဘက်ဒေသရှိ Moulbek ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုရောက်တော့ M.Notovitch က prayers wheel တွေအကြောင်းကို ရေးပြထားပါတယ်။ အဲဒီ prayers wheel တွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးများ ကိုင်ဆောင်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ prayers wheel တွေမှာ "Om mani padme hum" i.e., Om, the jewel in the lotus, amen! (အုမ်မဏိပဓ္မေဟုမ်) ဆိုတာမျိုးတွေ့ရကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ (The Unknown Life of Jesus Christ by Nicolas M. Notovitch, Page: 43)
ဒီနေရာမှာ စဉ်းစားရမှာက အုမ် - ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ဟိန္ဒိဒူဘာသာ၀င်တွေရဲ့ စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ထေရဝါဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအနေနဲ့ဆန်းစစ်ရမှာက အဲဒီအချိန် အဲဒီ နေရာမှာရှိနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ သန့်စင်ခြင်းရှိမရှိဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။
Moulbek ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုရောက်တော့ အဲဒီက လားမားဘုန်းကြီးတစ်ပါးက M. Notovitch တို့ကို ခရီးဦးကြိုပြုခဲ့ပြီး ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့စဉ် သူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကို M. Notovitch က အောက်ပါ အတိုင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
" .... it will require great efforts to bring back these descendants of Buddhists into the way of the true God. As for the Europeans, it is an entirely different matter. Not only do they profess the essential principles of monotheism, but they also areapart of the worshipers of Buddha under almost the same title as the Thibetan Lamas. The only error of the Christians is that after having adopted the great doctrine of Buddha, they completely separated themselves from him and createdadifferent Dalai Lama. " (The Unknown Life of Jesus Christ by Nicolas M. Notovitch, Page: 44)
အထက်ပါဖော်ပြချက်ကို ဂရုဓမ္မပြုဖတ်ရှုစေလိုပါတယ်။ ဗုဒ္ဓအဆက်အနွယ်တွေကို မှန်ကန်သော လမ်းကြောင်းအတိုင်း ထာ၀ရဘုရားရှင်(GOD)ဆီကို ပြန်လည်အာရုံပြုစေဖို့ ကြီးမားတဲ့ ဝိယမစိုက် ထုတ် မှုလိုကြောင်း၊ ခရစ်ယာန်တွေဟာ monotheism (တစ်ဆူတည်းဝါဒ)ကို ကိုးကွယ်ကြပေမယ့် ဗုဒ္ဓ ကို တိဘက်ရှိလားမားတွေလိုပဲ စာရင်းသွင်းကြကြောင်း၊ ခရစ်ယာန်တွေ ဟာ ဗုဒ္ဓစာပေတွေကို ကူးချပေမယ့် ကွဲပြားတဲ့ ဒလိုင်လားမားကို ဖန်တီးကြကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲဒီလားမားဘုန်းကြီးနဲ့ M.Notovitch တို့ အပြန်အလှန်စကားပြောပုံကို ဆက်လက်တင်ပြထား ရာမှာ - ဘုန်းကြီးက ယေရှုကို ဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်တစ်ပါးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ သူ(ယေရှု)ဟာ မိမိတို့ ဗုဒ္ဓ သာသနာ ပြန့်ပွားရေးအတွက် တရားဟောဆရာအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရကြောင်းပြောလေတော့ M. Notovitch က -
" You have just told me thatason of Buddha, Issa, had been chosen to spread your religion over the world. Who then is he? asked M.Notovitch. " (The Unknown Life of Jesus Christ by Nicolas M. Notovitch, Page: 45)
အထက်ပါအတိုင်း သူဘယ်သူလည်း မေးလေတော့ လားမားရဲ့အဖြေက -
" The lama was amazed at the question but said in reply: ' Issa isagreat prophet, one of the first after the twenty two Buddha; he is greater than all the Dalai Lama, for he constitutesapart of the spirituality of God. It is he who has instructed you, who brings back the frivolous souls to the knowledge of God, who has rendered you worthy of the blessings of the Creator, and who has endowed each being with the knowledge of good and evil; .... " (The Unknown Life of Jesus Christ by Nicolas M. Notovitch, Page: 45)
ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ သိရှိရတာက ဗုဒ္ဓရော၊ ယေရှုပါ ထာ၀ရဘုရားသခင်(GOD) ရဲ့ဘက်တော်သား များဆိုတာပါပဲ။ "" ဗုဒ္ဓပေါင်း ၂၂ ပါးနောက်ပိုင်း အီဆာ(ယေရှု) ဟာ ပထမဦးဆုံး မဟာတမန်တော် တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ (ဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဂေါတမနဲ့ ယေရှုအဆင့်ခြင်းတူသလိုဖြစ်ပါတယ်။) ယေရှုဟာ လားမားတွေအားလုံးထက်သာလွန်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သူဟာ (GOD) ထာ၀ရဘုရား သခင်ရဲ့ ဝိညာဏစွမ်းအား၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်ကို ပြဌာန်းသူဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ သေးနုတ်သိမ် ဖျင်းတဲ့ ဝိညာဉ်များကို GOD (ထာ၀ရဘုရားရှင်) တည်းဟူသော အသိပညာစမ်းပေါက်ဆီသို့ ပြန်လည်သယ်ဆောင်လာပါတယ်။ Creator ၊ ဖန်ဆင်းရှင် ၏ မဟာကောင်းချီးမင်္ဂလာတော်များအား အသင်တို့ထံပါးရောက်ရှိလာ စေရန် လှစ်ဟပြသခဲ့ပါတယ်။… "" စသဖြင့်ပါ။ ဒါတွေကတော့ ထေရ ဝါဒီမဟုတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်လားမားဘုန်းကြီး ပြောခဲ့တဲ့ စကား တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမှာ GOD, Creator ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးတွေကိုသာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ M. Notovitch ဟာ ခရီးဆက်လက်နှင်ရင်း Lamieroo လို့ခေါ်တဲ့ လားမားတွေရဲ့ Headquarters ဌာနချုပ်ဆီကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒိမှာလည်း အုမ်မဏိပဓ္မေဟုမ် ကိုတွေ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပြန်ပါတယ်။ (ညွှန်းပြီးစာအုပ် - စာမျက်နှာ ၄၇) ဒါနဲ့ပဲ M. Notovitch ဟာ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သူသိခဲ့ရတဲ့ အီဆာ(ယေရှု) အကြောင်းမှတ်တမ်းများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီက လားမားတွေက သူ့ကို Leh (လားဟ်) မြို့ကိုညွှန်ခဲ့တာကြောင့် ဆက်လက်ခရီးနှင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ Leh ဆိုတာ Ladek (လဒက်ခ်မြို့ ) ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ပြီး လူ ၅၀၀၀ ခန့်နေတဲ့ မြို့ငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။
M.Notovitch ဟာ Leh သို့ရောက်ပြီးနောက်နေ့မှာပဲ ကျော်ကြားတဲ့ Himis ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ M.Notovitch တို့ဟာ Buddhist Religious Festival (ဗုဒ္ဓဘာသာရေးပွဲ တော်) တစ်ခုနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး အဲဒီပွဲတော်ကို ဖော်ပြထားပုံက အတော်လေး စိတ်၀င်စားဖွယ်ဖြစ်ပါ တယ်။
" Regarding this religious festival, the Lama explained to the visitor that there wasareligious side to all this theatrical performance which expressed to the initiate the fundamental principles of Buddhism, and wasapractical means for maintaining the ignorant in obedience and love to the only Creator, just asachild is submissive to its parent byaplaything." (The Unknown Life of Jesus Christ by Nicolas M. Notovitch, Page: 52)
(Creator) ဖန်ဆင်းရှင်ကို ချစ်ခြင်းနဲ့ နာခံခြင်းတွေ ပျောက်ပျက်လျစ်လျူပြုခြင်း မဖြစ်စေဖို့ (ဒီပွဲတော်က) ရည်ရွယ်ပြီး ဒါက fundamental principles of Buddhism ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အခြေခံ နည်းနာ လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။
M.Notovitch အနေနဲ့ ယေရှုနဲ့စပ်လျဉ်းပြီး Himis ဘုန်းကြီးကျောင်းက လားမားတစ်ပါးထံ မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အဖြေက -
" The Lama replied the name of Issa is much respected among Buddhists, but he is scarcely known except among the chief Lamas, who have read the rolls relating to his life. There is an infinite number of Buddhas, similar to Issa, and the eighty-four thousand rolls which exist abound in details about each of them; but very few people have readahundredth part of them. In order to conform to the established custom, each pupil or Lama who has visited Lassa does not fail to makeapresent of one or more of these copies to the convent to which he belongs. Our monastery possessesagreat number of these, and among them are descriptions of the life and works of Buddha Issa , who preached the holy doctrines in India and among the sons of Israel, and who was put to death by the heathen whose descendants adopted the beliefs which he advocated, and these beliefs are yours. The great Buddha, the soul of the universe, is the incarnation of Brahma. He ramains motionless most of the time, enclosing within himself all things since the origin of beings, and his breath gives life to the world. He has left man to his own will; at certain times, however, he throws off his inaction and invests himself withahuman form in order to try and save his creatures from irremediable destruction. In the course of his terrestrial existence, Buddha createsanew world among the misled people; then he disappers again from the earth to become once more an invisible being, and return to his life of perfect felicity. Three thousand years ago the great Buddha incarnated himself into the celebrated Prince Shakya Muni, upholding and spreading abroad the doctrines of his twenty incarnations. Two thousand five hundred years ago the great soul of the world incarnated itself again in Gautama, casting the foundation ofanew world in Burma, in Siam and in different islands. " (The Unknown Life of Jesus Christ by Nicolas M. Notovitch, Page: 52-53)
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များထဲက အလေးကရုပြုမိတဲ့အချက်များကို ဖော်ပြရရင်
၁) အီဆာ(ယေရှု)နဲ့တူတဲ့ဗုဒ္ဓပေါင်းမြောက်မြားစွာ ပွင့်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို infinite (အများကိန်း) လို့ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အီဆာ(ယေရှု)သည် ဗုဒ္ဓတစ်ပါးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြ ရင် လွဲမှားနိုင်စရာမရှိပါ။
၂) စကြ၀ဠာကြီးရဲ့ ဝိညာဏစွမ်းအားဖြစ်တဲ့ မဟာ ဗုဒ္ဓဟာ ဗြဟ္မာ ၀င်စားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ တွေ့ရ ပါတယ်။
၃) ဦးဆောင်မှုမဲ့နေတဲ့ လူသားတွေအတွက် ဗုဒ္ဓဟာ ကမ္ဘာသစ်ကို ဖန်ဆင်းပြီး ဒီကမ္ဘာမြေကနေ ပျောက်ကွယ်ကာ မမြင်ရတဲ့အဖြစ် တဖန်ဖြစ်သွားပြန်ပါတယ်။
၄) လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀၀၀ က စကြမုနိဗုဒ္ဓဟာ ၀င်စားပြီး ဤကမ္ဘာမြေကို သက်ဆင်းတော်မူခဲ့ပြီး
၅) လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ မှာတော့ ဂေါတမဗုဒ္ဓဟာ ၀င်စားပြန်ကာ ကမ္ဘာမြေသို့ သက်ဆင်း တော်မူခဲ့ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များက လားမားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဖြစ်ကြောင်း M.Notovitch က ဖော်ပြ ထားပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က အီဆာ(ယေရှု)မှတ်တမ်းကစာလိပ်ပေါင်း ၈၄၀၀ အဖြစ် မှတ်တမ်း တင်ထားပေမယ့် လူအနည်းငယ်မျှသာ ရာဂဏန်းမျှသော မှတ်တမ်းစာလိပ်များကို ဖတ်ဖူး ကြောင်း လားမားပြောထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သူတကာဖတ်ဖူးတဲ့စာလိပ်ပေါင်းကို ၉၉၉ အဖြစ်သတ်မှတ် မယ် ဆိုရင်တောင် ကျန်တဲ့ ၇၄၀၁ မျက်နှာမှာ ဘာတွေရေးထားသေးလဲ ဆိုတာ M.Notovitch မသိ ခဲ့ရတာထင်ရှားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သူ့ရဲ့ The Unknown Life of Jesus Christ စာအုပ်ကသာမာန်စာအုပ် အထူမျိုးပဲရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Posted in: ဆောင်းပါး , တိဘက် , ဗုဒ္ဓဘာသာ , ယေရှု , သုတေသန
ပါကစ္စတန် : ရှီယာများအား အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်...